Alote Myanmar - မြန်မာနိုင်ငံသားများအတွက် General Workers, Security အလုပ်အကိုင်များ
အထွေထွေလုပ်သား၊လုံခြုံရေး Jobs in Myanmar
အထွေထွေလုပ်သား၊လုံခြုံရေး အလုပ် 74 ခုရှာတွေ့ပါသည်။
ယနေ့ မြန်မာနိုင်ငံ တွင် ထိပ်တန်း အလုပ်အကိုင်များ။ Alote.com.mm တွင် နောက်ဆုံး လစ်လပ်နေရာများအတွက် အလုပ်ရှင်များထံ တိုက်ရိုက်လျှောက်ထားပါ။
- Outsource security team အားစီမံခန္႕ခြဲရမည္ - သက္ဆိုင္ရာ အစိုးရအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ တာ၀န္က်ရာ ၀န္းက်င္ရွိေနထိုင္သူမ်ားႏွင့္ ေကာင္းမြန္ေသာ ဆက္ဆံေရးတည္ေဆာက္ႏိုင္ရမည္ - လုံျခံဳေရးဆိုင္ရာ အစီရင္ခံစာမ်ားကို ေရးသားႏိုင္ျပီး လိုအပ္ပါက ထုတ္ျပန္ခ်က္ (Statements) မ်ားျပဳလုပ္ရမည္ - လုံျခဳံေရးကိစၥမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အျခားေသာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ရမည္
အကျိုးအမြတ်: * Rewards for over performance
အခြေခံပညာ အထက်တန်းအဆင့်ရှိသူ ဖြစ်ရမည် အသက် (25) နှစ် အထက်ရှိပြီး ကျမ်းမာသန်စွမ်း၍ တက်ကြွသူဖြစ်ရမည်။
သန့်ရှင်းရေး | Cleaner, Maid, Janitor
Project-based ဖြင့်လုပ်ကိုင်ရမည်ဖြစ်ပြီး ကနဦးအနေဖြင့် ၆ လစာချုပ်ဖြင့် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရမည်။ - ပစ္စည်းထိန်းသိမ်းသို​လှောင်ခန်းတွင်း၊ ပြင် သန့်ရှင်း​ရေးလုပ်ငန်းများကို သေသပ်ကောင်းမွန်စွာလုပ်ဆောင်နိုင်ရမည်။
တင်သောနေ့: 02 Dec 2021
General Worker for international company in Yangon, cleaning, kitchen, car , garage
Security ပိုင်းဆိုင်ရာ နည်းဗျူဟာများကို စီစဉ်ခြင်းနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ ချမှတ်ထားသော နည်းဗျူဟာများကို လက်တွေ့လိုက်နာကျင့်သုံးခြင်းနှင့် အခြား Department များသို့ ဖြန့်ဝေပေးခြင်း၊ Security Officer များ၏ နေ့စဉ်လုပ်ငန်းတာဝန်များကို သင်ကြားပေးခြင်းနှင့် ကြီးကြပ်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ လုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်အရ အခြားဌာနများ၏ မန်နေဂျာများနှင့်အတူ အစည်းအဝေးတက်ရောက်ခြင်း၊ သက်ဆိုင်ရာကျောင်းအလိုက် Security နှင့်ဆိုင်သည့် လုပ်ဆောင်ချက်များကို စီစဉ်ရေးဆွဲခြင်းနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ အရေးပေါ်အခြေအနေများကို တုန့်ပြန်သည့်အခါ အခြားဝန်ထမ်းများနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း၊ Incidents နှင့် စည်းကမ်း ချိုးဖောက်ခြင်းဆိုင်ရာ ဖြစ်စဉ်များကို သုံးသပ်ခြင်းနှင့် တင်ပြခြင်း၊ Incidents နှင့် စည်းကမ်း ချိုးဖောက်ခြင်းဆိုင်ရာ ဖြစ်စဉ်များကို အကောင်းဆုံးဖြေရှင်းခြင်း၊ Security Status များကို Management သို့ report တင်ပြခြင်း၊
စားဖိုဆောင် အကူ ( Kitchen Helper )
Ga Mone Pwint Company Limited
• အသား၊ ငါး ၊ ပင်လယ်စာ ကိုင်နိုင်ရမည် • အိုးခွက် ပန်းကန်များ ဆေးကြောရမည် • အသီးအနှံ ၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ ဆေးကြော သန် ့စင်ပြီး ထုတ်ပိုးရမည် • မီးဖိုချောင် Kitchen အတွင်း လိုအပ်သည်များကို ကူညီ လုပ်ကိုင်နိုင်ရမည်
လုံခြုံရေးဝန်ထမ်း ( Security )
• ကားအဝင်/ အထွက်၊ လူအဝင်/ အထွက် စာရင်းများအား နေ့စဉ်မှတ်တမ်းတင်ရမည်။ • Shopping Mall အတွင်း/ အပြင် လုံခြုံရေး တာဝန်ယူနိုင်ရမည်။ • ရုံးကားများ နှင့် ပြင်ပကားများအား ကားပါကင်တွင် စနစ်တကျ နေရာချထားပေးရမည်။ • Shopping Mall အတွင်း/ အပြင် စီစီတီဗွီ မှတ်တမ်းများအား အလှည့်ကျ ကြည့်ရှုပြီး မှတ်တမ်းတင် သိမ်းဆည်းထားရှိရမည်။ • နေ့စဉ် လုံခြုံရေးမှတ်တမ်းများအား ရေးသွင်းဆောင်ရွက်ရမည်ဖြစ်ပြီး ထူးခြားဖြစ်စဉ်များရှိပါက အချိန်နှင့်တပြေးညီ တင်ပြဆောင်ရွက်ရမည်။ • အခါအားလျော်စွာ ပေးအပ်လာသော တာဝန်များကိုလည်း ကျေပွန်စွာ ထမ်းဆောင်နိုင်ရမည်။
Black Sea Seafood
• ဆိုင်အခြေအနေကိုကြည့်ပြီး နိုင်နင်းစွာ အလုပ်လုပ် နိုင်ရမည်။ • အသင်းအဖွဲနှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်ရမည်။ • ဆက်ဆံရေး ပြေပြစ်ရမည်။ • အသောက်အစား ကင်းရှင်းသူဖြစ်ရမည်။ *အစားအသောက်လုပ်ငန်းအားစိတ်ဝင်စားပြီး လိုအပ်သလို ကူညီလုပ်ကိုင်နိုင်ရမည်။ (Eg. ထုပ်ပိုးပြင်ဆင်မှု)
ဘောဂသိဒ္ဓိ | နေပြည်တော် နေပြည်တော်
- လုံခြုံရေးကင်းလှည့်ခြင်းနှင့် Control Measuresများ ပြုလုပ်ပေးရမည်။ - လုံခြုံရေး အဖြစ်အပျက်များကို ဖြေရှင်း သတင်းပို့ရမည်။ - လူနှင့်ယာဉ်အသွားအလာ လုံခြုံရေးထိန်းချုပ်မှုအစီအမံများ ချမှတ်ဆောင်ရွက်ရမည်။ - CCTV စောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့် မှတ်တမ်းတင်ခြင်းများ ဆောင်ရွက်ရမည်။ - Notify management of occurring deficiencies or needs for repairs - Make adjustments and minor repairs - Cooperate with the rest of the staff - Follow all health and safety regulations
အကျိုးအမြတ်: - Bonus - ဖုန်းပက်ကေ့ချ်ပေးပါသည်။"
ဇမ္ဗူသီရိ | နေပြည်တော် နေပြည်တော်
သန့်ရှင်းမှုထိန်းသိမ်းရေးဝန်ထမ်းသည် ရုံးနှင့် ရုံးပတ်ဝန်းကျင် အမြဲသန့်ရှင်းသပ်ရပ်ပြီး ကျန်းမာရေးနှင့်ညီညွတ်သော လုံခြုံစိတ်ချရသော ပတ်ဝန်းကျင်ဖြစ်အောင် ဆောင်ရွက်ရန် တာဝန်ရှိပါသည်။ နေ့စဉ် လုပ်ငန်းတာဝန်အချိန်ဇယားအတိုင်း ရုံးနှင့် ရုံးပတ်ဝန်းကျင်ကို သန့်ရှင်းအောင်ဆောင်ရွက်ရမည်။ အထက်တာဝန်ရှိသူလိုအပ်သော ရုံးလုပ်ငန်းများကို ကူညီဆောင်ရွက်ပေးရမည်။ အစည်းအဝေးအတွင်းလိုအပ်သော အစားအသောက်များစီစဉ်ပေးခြင်းနှင့် ပြင်ပမှ ဧည့်သည်များအတွက် လိုအပ်သည်များကို Branch Manager ၏ ညွှန်ကြားချက်ဖြင့် ဆောင်ရွက်ပေးရမည်။ သန့်ရှင်းမှုထိန်းသိမ်းရေးဝန်ထမ်းသည် ရုံးမှချမှတ်ထားသောစည်းကမ်းများနှင့် ညွှန်ကြားချက်များကို လိုက်နာရမည်။ ပျက်စီးနေသော ရုံးသုံးပစ္စည်းများရှိခဲ့ပါက လိုအပ်လျှင် ပြင်ဆင်ခြင်း၊ ထိန်းသိမ်းခြင်းများ ဆောင်ရွက်ရမည်။ လုံခြုံရေးစစ်ဆေးမှုမှတ်တမ်းများ စစ်ဆေးရန်နှင့် အရေးပေါ်ကိစ္စရပ်များရှိပါက Branch Manager ထံသို့သတင်းပို့ရမည်။ Branch Manager ထံသို့ နေ့စဉ်/ အပတ်စဉ် ရုံးပတ်ဝန်းကျင်ထူးခြားချက်များ၊ အရေးပေါ် ရှေးဦးသူနာပြုဆေးဘူးစစ်ဆေးခြင်းများနှင့် မီးသတ်ဆေးဘူး စစ်ဆေးခြင်းများကို သတင်းပို့ရမည်။
အကျိုးအမြတ်: အချိန်ပိုကြေး နေစရာအဆောင် ပျော်ရွှင်ဖွယ်လုပ်ငန်းခွင်
Sein Hinn Trading
ပဲခူး | ပဲခူးတိုင်း ပဲခူးတိုင်း
- ကျန်းမာသန်စွမ်းပြီး နေ့/ညမရွေးတာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်ရမည်။ - အကျင့်စာရိတ္တကောင်းမွန်ပြီး တာဝန်နှင့်ဝတ္တရားတို့ကို ကျေပွန်စွာထမ်းဆောင်ရမည်။ - ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်ပြီးအဖွဲ့အစည်းနှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။ - လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံရှိသူဦးစားပေးမည်။
Aung Kyaw Car Workshop
စာရိတ္တကောင်းမွန်ရမည်။ သန့်ရှင်းရေးကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်လုပ်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။ အချိန်မှန်မှန်နှင့်ရက်မှန်မှန် ဆင်းပေးနိုင်သူဖြစ်ရမည်။
ဒက္ခိဏသီရိ | နေပြည်တော် နေပြည်တော်
(က) အနည်းဆုံး အခြေခံပညာ အလယ်တန်းအဆင့်ရှိသူ ဖြစ်ရမည်။ (ခ) အသက် (၁၈ - ၂၅) နှစ်အတွင်း လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံရှိသူ ဦးစားပေးမည်။ (ဂ) အကျင့်စာရိတ္တကောင်းမွန်၍ ပေးအပ်သည့် တာဝန်ကို ကျေပွန်စွာထမ်းဆောင်နိုင်သူ ဖြစ်ရမည်။
အကျိုးအမြတ်: Join an experience team
Recruiter active 51 mins ago The recruiter at this company was last active reviewing applications.
- အိမ်မှုကိစ္စအထွေထွေအဝတ်လျှော်ခြင်း (အဝတ်၊ စောင်၊ ကော်ဇော၊ ကုလားကာ) စသော အလုပ်များလုပ်ဆောင်ရမည် - သန့်ရှင်းရေး (ပန်းပွင့်ခြင်း၊ ဖုန်စုပ်ခြင်း၊ သုတ်ခြင်း) အိမ်သာသန့်ရှင်းရေး (နံရံ၊ ကြမ်းပြင်၊ ကြွေပြား) - မီးပူတိုက်ခြင်း (အင်္ကျီ၊ ဘောင်းဘီ) - အိမ်သုံးကုန်ပစ္စည်းစီမံခန့်ခွဲနိုင်ရမည်
Hotel Relax (Chaungthar)
အသက် 40 နှစ်အောက်ဖြစ်ရမည်။ အတွေ့အကြုံ အနည်းဆုံး တစ်နှစ်ရှိရမည်။ အသောက်အစား ကင်းရမည်။
တောင်သူ | Farm Work
လှည်းကူး | ရန်ကုန်တိုင်း ရန်ကုန်တိုင်း
ကြက်ဉ‌ဖောက်စက်မှ တနင်္လာနှင့်သောကြာနေ့တိုင်းထွက်ရှိသော ကြက်ပေါက်များကို ကာကွယ် ဆေးထိုးခြင်း၊ ကာကွယ်ဆေးဖျန်းခြင်းလုပ်ငန်းများကို ကြီးကြပ်တာဝန်ယူလုပ်ဆောင်ပေးရန်။ ကာကွယ်ဆေးမပြုလုပ်မီကြိုတင်၍ ဆေးထိုး၊ ဆေးဖျန်းစက်များကို ပြင်ဆင်ထားပြီး လိုအပ်သော ဆေးပမာဏ၊ အရေအတွက်ကိုထုတ်ယူပြင်ဆင်ထားရန်။ ဆေးထိုး၊ ဆေးဖျန်းလုပ်ငန်းပြီးစီးပါက စက်များကိုကောင်းမွန်သေသပ်စွာ ဆေးကြောသန့်စင်၍ စနစ်တကျသိမ်းဆည်းထားခဲ့ရန်။ မိမိဆေးထ်ုးအဖွဲ့သားများအား ဆေးထိုး၊ ဆေးဖျန်းလုပ်ငန်းများ ကျွမ်းကျင်တတ်မြောက်အောင် နည်းပြသင်တန်းများပေးရန် ဆေးထိုး၊ ဆေးဖျန်းပြီးသောကြက်ပုန်းများကို အကောင်ရေမှန်ကန်မှုစစ်ဆေးပြီး တံဆိပ်အမှတ် အသားများရိုက်နှိပ်ပေးရန်။ ဆေးထိုး၊ ဆေးဖျန်းစက်များတွင် တစ်စုံတစ်ရာချို့ယွင်းချက်တွေ့ရှိပါက မန်နေဂျာသို့ချက်ချင်း တင်ပြရန်။ ကာကွယ်ဆေးများကို စနစ်တကျစာရင်းသွင်းမှတ်တမ်းထားရှိပြီး ထုတ်ယူအသုံးပြုရန်။ ကာကွယ်ဆေးလက်ကျန်အနေအထားကို အမြဲစစ်ဆေးတွက်ချက်၍ မန်နေဂျာသို့သတင်းပို့ရန်။ ကာကွယ်ဆေးထိုးခြင်းကို နေ့လည်(၁၂း၀၀)နာရီမှစတင်ပြုလုပ်၍လုပ်ငန်းပြီးဆုံးသည်အထိလုပ် ဆောင်ပေးရန်။ ကာကွယ်ဆေးပြုလုပ်ရန်မရှိသောနေ့များတွင် အခြားဖောက်စက်လုပ်ငန်းများကို ပူးပေါင်းဆောင် ရွက် လုပ်ကိုင်ပေးရန်။ ဆေးထိုးအဖွဲ့များ ၊ တခြားဖောက်စက်ဝန်ထမ်းများနှင့်ကောင်းမွန်သော Team Workကို ဖန်တီး ဆောင်ရွက်ရန်။ ဒါရိုက်တာနှင့်မန်နေဂျာမှ ပေးအပ်သောအခြားတာဝန်များအားလည်း ကူညီလုပ်ဆောင်ပေးရမည်။
အကျိုးအမြတ်: - Meal and accommodations provided - Performance bonus - Trainings given.
လုံခြုံရေး - ပြည် ၁ ဦး
လုံခြုံရေးဝန်ထမ်း – 1 ဦး (ပြည်မြို့ - ၁ ဦး) အဓိကတာဝန်များ - ဟေမာန်ကုမ္ပဏီ၏ ရုံးအဆောက်အအုံနှင့်တကွ ကုမ္ပဏီပိုင်ပစ္စည်းများကို ကာကွယ် ထိန်းသိမ်း စောင့်ရှောက်ရမည်။ - ဟေမာန်ရုံးသို့လာသော ဖောက်သည်များ အားဧည့်ကြိုပြုခြင်း၊ ဝန်ထမ်းများ နှင့် ဖောက်သည်များ၏ ကားနှင့် ဆိုင်ကယ်များကို ရပ်နားရန် နေရာပြင်ဆင်ခြင်းတို့ကို ဝန်ဆောင်မှုပေးရမည်။ - နေ့ နှင့် ည အလှည့်ကျ တာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်ရမည်။ - ကုမ္ပဏီမှ ချမှတ်ထားသော စည်းမျဉ်း၊ စည်းကမ်းများကို လိုက်နာ နိုင်ရမည်။ - မန်နေဂျာမှ တာဝန်ခွဲဝေပေးသော အလုပ်တာဝန်များကို ထမ်းဆောင်နိုင်ရမည်။
ဧည့်ခန်းစက်ြံများ၊ ဝန်ထမ်းရုံးခန်းများနှင့်အများသုံးနေရာများအား သန့်ရှင်းရေးပြုလုပ်ခြင်း ပန်းလှိုင်အိမ်ရာဝန်းအတွင်းရှိအိမ်ယာများတွင် သန့်ရှင်းရေးပြုလုပ်ပေးခြင်း
သန့်စင်ခန်းများ သန့်ရှင်းရေးနှင့် ပန်းကန်ဆေးခြင်း၊ အမှိုက်ဖယ်ရှားခြင်း၊ သုတ်သင်ရှင်းလင်းခြင်း အပါအဝင် သန့်ရှင်းရေးတာဝန်များမှတစ်ဆင့် စားသောက်ဆိုင်၏ အလုံးစုံသန့်ရှင်းရေးတွင် တက်ကြွစွာပါဝင်ဆောင်ရွက်ရမည်။ သန့်ရှင်းသပ်ရပ်ပြီး တည်းခိုခန်းများ။ အစားအသောက်များကို သန့်ရှင်းသပ်ရပ်စွာ သန့်ရှင်းရေးလုပ်ကာ သိုလှောင်ထားသောနေရာကို သိမ်းဆည်းရမည်။
အလုပ်တာဝန်များ: ၁) ဖုန်သုတ်၊ တံမြက်စည်းလှည်း၊ ကြမ်းတိုက် ရမည်၊ ၂)လိုအပ်သည့်သန့်ရှင်း​ရေးပစွည်းများ၊ ပြင်စရာရှိသည်များကို မှတ်သား၍တင်ပြရမည်၊ ၃)တစ်ရှုးလိပ်၊ ဆပ်ပြာ စသည်တို့ကိုမပြတ်လတ်​​အောင်ဖြည့်​ထား၍ ပစွည်းများကိုစနစ်တကျ စီစီရီရီထားရမည်၊ ၄)အိမ်သာ၊ မှန်၊ တံခါး၊ ပြူတင်း​ပေါက်တို့ကိုလည်းသန့်ရှင်း​အောင်​ထားရမည်၊ ၅) ရုံးတစ်ရုံးလုံးအားလိုအပ်လျှင်လိုအပ်သလိုသန့်ရှင်း​​​ရေးလုပ်ရမည်။
SCT COMPANY LIMITED
အသက်၁၈ နှင့် ၃၅ နှစ်ကြားဖြစ်ရမည်။ အကျင့်စာရိတ္တကောင်းမွန်၍ အသင်းအဖွဲ့နှင့် လုပ်ကိုင်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။ ရုံးစည်းကမ်းကိုတိကျစွာ လိုက်နာနိုင် ၍ နာခံလွယ်သူဖြစ်ရမည်။
အကျိုးအမြတ်: ထမင်းစရိတ် ရက်မှန်ကြေး
Site Assistant / Helper
- ကွန်ပျုတာ အခြေခံတတ်ကျွမ်း ရပါမည်။ - ဆောက်လုပ်ရေး / Decoreation ပိုင်း နှင့် ပတ်သတ်၍ အတွေ့အကြုံ အနည်းဆုံး (၁ နှစ်)ရှိရမည်။ - လိုအပ်ပါက အချိန် ပို ဆင်း နိုင် ရမည် ။
တံတာဦး | မန္တလေးတိုင်း မန္တလေးတိုင်း
စားသောက်ကုန် လုပ်ငန်းအတွက် ခန့်ထားရန် လုံခြုံရေး ဝန်ထမ်း အလိုရှိသည်။ -နေ့/ည အလှည့်ကျတာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်ရမည်။ -အရက်သေစား‌သောက်စား တတ်သူများလျောက်ထားရန်မလို။ -လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံရှိလျင်ဉီးစား‌ေပးခန့်ထားမည်။ -ပညာအရည်အချင်း အလယ်တန်းအဆင့်ရှိရမည်။ -သပ်ရပ်စွာ ဝတ်စားဆင်ယင်တတ်သူဖြစ်ရမည်။ -အသက် (၃၀ မှ ၆၀ အထိ) ။ -ပြောဆိုဆက်ဆံရေး ပြေပြစ်ရမည်။ တည်နေရာ- မန္တလေးမြို့တွင်း အလှည့်ကျ တာဝန်ထမ်းဆောင်ရမည်။
Ready Packing အထုတ်အပိုးပြင် (မ)
အရေအတွက်ပြီးစီးမှုအလိုက်လစာ အကျိုးခံစားရမည်။ အကျင့်စာရိတ္တကောင်းမွန်၍အများနှင့်ပူးပေါင်းလုပ်ကိုင်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။
အကျိုးအမြတ်: ထမင်းစရိတ် ခရီးစရိတ် ရက်မှန်ကြေး
သန့်ရှင်းရေးအမျိုးသမီး - Cleaner
Strong Source Group of Companies
စားသောက်ဆိုင်/မီးဖိုချောင် သန့်ရှင်းရေးများလုပ်ဆောင်ရမည် အတွေ့အကြုံရှိက ပိုမိုသင့်တော်ပါသည် ကျန်းမာရေး ကောင်းမွန်သူဖြစ်ရမည်